HowTo Archives | Page2of4| Pyae Heinn Kyaw's Blog
FaceApp ဟာကိုယ့်ရဲ့ မျက်နှာ Data တွေကိုစုဆောင်းပြီး ဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးချနေလဲ? FaceApp ဟာ စိတ်ချရပါ့မလား? မိမိရဲ့ Data တွေကို FaceApp ကနေဘယ်လိုဖျက်ပစ်ရမလဲ?
Cyber Security, HowTo, Knowledge / By Pyae Heinn Kyaw
FaceApp ဟာကိုယ့်ရဲ့ မျက်နှာ Data တွေကိုစုဆောင်းပြီး ဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးချနေလဲ? FaceApp ဟာ စိတ်ချရပါ့မလား? မိမိရဲ့ Data တွေကို FaceApp ကနေဘယ်လိုဖျက်ပစ်ရမလဲ? Read More »
iPhone တွေမှာ နိုင်ငံအစုံကသီချင်းပေါင်းစုံကို High Quality နဲ့ဒေါင်းပြီးနားဆင်နိုင်မည့် Application
UNICODE 🚨 ဒီ Article ကို Copy ကူးချင်ရင် PHK Knowledge Sharing ကို Credit ပေးကြပါခင်ဗျာ 🚨 ကျွန်တော့် Page မှာ သီချင်းတွေကို ဒေါင်းချင်လို့ ဘယ် App သုံးရမလဲဆိုပြီး ခဏခဏလာမေးလေ့ရှိပါတယ် .. ခက်တာက Music Download လုပ်တဲ့ App တွေဟာ AppStore ပေါ်မှာ ခဏလောက်ပဲအတင်ခံပြီး Apple ကပြန်ပြန်ဖြုတ်သွားလေ့ရှိပါတယ် .. ဒါကြောင့် ဒီ App လေးကိုအမြန်ဒေါင်းထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ အခု App ဟာ ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရသလောက် တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ် .. Free App ဖြစ်တာကြောင့် Ads လေးတွေတော့ မကြာခဏဝင်တတ်ပါတယ် (ကျွန်တော်ကတော့ AdBlocker တစ်ခုသုံးပါတယ် …
iPhone တွေမှာ နိုင်ငံအစုံကသီချင်းပေါင်းစုံကို High Quality နဲ့ဒေါင်းပြီးနားဆင်နိုင်မည့် Application Read More »
ခုတလော သင့် iPhone ဘာကြောင့်ပူနေရတာလဲ? သင့် iPhone တွေမှာ 80% ပြည့်တာနဲ့ အားဆက်မဝင်တဲ့ ပြဿနာဖြစ်နေတာကရော ဘာကြောင့်လဲ ?
UNICODE အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ .. ဒီနေ့မှာတော့ iOS User တော်တော်များများကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲလေး ၂ ခုကို ဖြေရှင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် .. အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကတော့ ဖုန်းအရမ်းပူတာနဲ့ Battery 80% ပြည့်ရင် အားဆက်မဝင်တဲ့ ပြဿနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ပထမဆုံးတချက်ဖြစ်တဲ့ ဖုန်းအရမ်းပူတဲ့ ကိစ္စကိုရှင်းလိုက်ကြရအောင် … ခုတလောမြန်မာနိုင်ငံက ဖုန်းတိုင်းပူပါတယ် .. ဘာလို့လဲ ? ရှင်းပါတယ် ရာသီဥတုပူလို့ပါ .. User တော်တော်များများက iOS Update ကြောင့်ဖုန်းပူတယ်လို့ထင်နေတာပါ .. အမှန်တကယ်ကမဟုတ်ပါဘူး .. ကျွန်တော်လဲ ဒီ iOS Update တွေကို Australia နိုင်ငံကနေသုံးနေတာပါပဲ .. ဒီမှာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ် အဓိက,ကတော့ ရာသီဥတုအရမ်းပူလို့ ဖုန်းလဲအလိုလိုလိုက်ပူတာဖြစ်ပါတယ် .. သင့်ဖုန်းမပူစေချင်ရင် အဲကွန်းခန်းထဲမှာသာသုံးပါ .. …
ခုတလော သင့် iPhone ဘာကြောင့်ပူနေရတာလဲ? သင့် iPhone တွေမှာ 80% ပြည့်တာနဲ့ အားဆက်မဝင်တဲ့ ပြဿနာဖြစ်နေတာကရော ဘာကြောင့်လဲ ? Read More »
UNICODE အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ .. ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ လူတွေသိပ်မသိကြသေးတဲ့ iPhone Calculator ရဲ့ tips & tricks5ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. တချို့လူတွေလဲ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ .. ဒီ Article ကတော့ မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် .. စလိုက်ရအောင် 1. မှားရိုက်မိတဲ့ ဂဏန်းတွေကိုဖျက်ခြင်း ဟုတ်ပါတယ် .. ကျွန်တော်လဲ iPhone စသုံးခါစက အတော်လေးတိုင်ပတ်ခဲ့တာပါ .. iPhone Calculator မှာ မှားရိုက်မိတဲ့ ဂဏန်းတွေကို ဖျက်လို့ရမယ့် Delete Key ထည့်သွင်းမပေးထားပါဘူး .. Delete key အစား ဂဏန်းတွေပေါ်မှာ ဘယ်ဖက်ကိုဖြစ်ဖြစ် ညာဖက်ကိုဖြစ်ဖြစ် ပွတ်ဆွဲလိုက်ရင် ဂဏန်းတွေပျက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် .. …
လူတိုင်းမသိကြသေးတဲ့ iPhone Calculator ကိုအသုံးပြုနည်း5နည်း Read More »